ပညာရည် ပြည့်ဝသော ဆရာများ အလိုရှိသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ပညာရည် ပြည့်ဝသော ဆရာများ အလိုရှိသည်
ပညာရည် ပြည့်ဝသော ဆရာများ အလိုရှိသည်
Posted by manawphyulay on Sep 18, 2014 in Education, Jobs & Careers | 14 comments
1.	Commercial Assistant Profession Teacher	Male/Female (1) post
–	Bachelor Degree from University of Economic or relevant knowledge
–	Experience in business management field is preferred.
2.	Cabinet Maker Profession Senior Teacher/ HoP	Male/Female (1) post
–	Have relevant certificate concerned with furniture making or civil engineering degree
–	Experience in wood based industry is preferred.
–	Experience in management and interesting furniture making and training is preferred.
3.	Electrician Profession Teacher	Male/Female (1) post
–	must beadegree holder of B.E (EP), AGTI (EP), or CVT graduate in electrician.
–	Experience in Electrical Installation field and Engineer Degree holder is preferred.
4.	Hotel & Gastronomy Assistant Profession Teachers	Male/Female (2) post
–	must beacertificate holder of Room division (Housekeeping, Front Office)
–	Experience in hotel management is preferred.
5.	English Teacher	Male/Female (1) post
–	Graduated in B.A (English) or Diploma in ELTM (or) ELT (or) FCE
–	Prefer the M.A (English) with3years experience
6.	Financial and General Administration Assistant	Male/Female (1) post
–	Bachelor of Commerce, LCCI Level-3 degree holder or the same education
–	Working experience in accounting is preferred.
The applicants should have at least5years working experience and2years teaching experience for 1 to5positions. Good command in English (4 skills) is preferable and usingacomputer (Microsoft Office). Periodically revise the curricula and up to date level of profession know-how and actively participate in Team Work. Interested candidates are invited to submit an application letter with CV or CVT Application, recent passport sized photo, Copy of relevant documents and Labour Card to the reception counter or by e-mail before 30th September 2014.
ပညာရေးဆိုင်ရာ အလုပ်လုပ်ချင်သော ဆရာ ဆရာမ များအတွက် အခွင့်အလမ်းပေါ့နော်။
ဟုတ်ပါတယ် လေးလေးခ။ ပညာလည်း ပေးရင်း ပညာလည်း ယူရင်း… ၀ါသနာပါတာကို လုပ်မယ့်သူများအတွက် အထူးပါပဲ။
အင်း အသက်ကလေးရလာမှ ကျနော် လည်း ကွန်ပျူတာ
ပညာရပ်တွေ လေ့လာချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ် ။
ပညာဆိုတာ အိုသည်မရှိပါရှင်။ အသက်ကြီးမှ ငယ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ယူချင်စိတ်ရှိနေရင် တတ်လွယ်ပါတယ်ရှင်။ ကွန်ပျူတာရှိရင် ဆောင်းပါးတွေ သတင်းတွေကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်ရိုက်သိမ်းထားလို့ရတာပေါ့ဆရာရယ်.. မဟုတ်ဘူးလား…
. မနောဖြူ လေးက CVT Myanmar ကလားဟင်…
တခုက CVT Myanmar HR ပိုင်းက လာကြေငြာတာ….
နောက်တခုက ဆရာမ…. အချင်းချင်း လစာကောင်းကောင်းနဲ့ ပြောင်းပါစေဆိုပီး လာကြေငြာတာ….
First Option က တကယ်တော့ မလုံလောက်ဖူးဗျ… ဒီထက် free ကျပီး effective ဖြစ်တဲ့ ဆိုက်တွေ ရှိတယ်…. မန်းဂေးဇတ်က စာရေးစာဖတ်ပဲကောင်းတာ…. ဒါဆို ဖြစ်နိုင်တာက second option ပဲ… အမက ရန်ကုန် ပညာရေးတက္ကသိုလ်က ဆရာမလို့ ထင်ပါ့…..
မနောဖြူလေးကို ဖဘ အကောင့်မှာ မြင်မိလိုက်သလားလို့ .. ဒါပေမယ့် လူများလွန်းလို့သေသေချာချာ မမှတ်ထားမိလိုက်ဖူး….
မနောက သတင်းကောင်းတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေကို မျှဝေတာတော့ အကျင့်ပါပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ မနောက ဆရာမ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက် ဖဘမှာ မနောဖြူတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ထဲက တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးရှင်..
ဒါနှမဟုတ်.. မြန်မာစာရေးနည်းအရ.. သူ/သူမ မှာ သူမဆိုတာမလိုတာမျိုး..
ဆရာမက… မလိုတာလား.. ??
ဆရာဆိုတာ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုထားပါတယ်။ တဂျီး ဒါနဲ့ မသိလို့ မေးကြည့်ဦးမယ် ဆရာမကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုရေးရပါသလဲဟင်။ ခေါ်တဲ့သူတွေလည်း ကွဲကွဲပြားပြား သိသွားရအောင် မေးကြည့်ပေးတာပါရှင်။
ခွေးလွှတ်လိုက်ပါ မနော ရယ်။
တို့ များ သူကြီးမင်းက မြန်မာအယူ တစ်ချို့ ကို ပြစ်နိုင်သေးဝူး တဲ့။ ;-)))
လမကုန်ခင်လျောက်လွှာ Email ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
စိတ်ဝင်စားရင် လျှောက်သာ လျှောက်..